Wararka ku saabsan BQ: bilaabida, mobilada, kiniiniyada, xidid iyo inbadan - Androidsis | Androidsis (Bogga 2)
BQ waxay iibisay 1,1 milyan oo taleefannada casriga ah sanadkii hore
BQ waxay iibisay 1,1 milyan oo taleefannada casriga ah sanadkii hore. Raadi wax badan oo ku saabsan xogta iibka ee shirkadda Isbaanishka sanadkii hore.
Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro: Telefoonada cusub ee BQ ee wata Android One
Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro: Taleefanada cusub ee BQ ee wata Android One. Waxbadan oo ku saabsan labada taleefan ee cusub ka raadi astaanta Isbaanishka ee suuqa dhawaan iman doonta
BQ Aquaris VS iyo VS Plus durba waa rasmi, ogow qeexitaanadooda
BQ Aquaris VS iyo VS Plus: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada cusub ee sumadda Isbaanishka ee horeyba loo heli jiray.
Unboxing BQ Aquaris X Pro processor noocee ah ayuu leeyahay? Snapdragon 626 ama Snapdragon 625?
Daahfurka BQ Aquaris X Pro iyo xiriirka ugu horreeya ee qiimaha caymiska ama dusha sare ee kala duwanaanta soo saaraha Isbaanishka.
Dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan BQ Aquaris X
Halkan waxaan kaaga tagayaa dib-u-eegistaan ​​qotoda dheer ee BQ Aquaris X si aad ugu raaxeysato wax kasta oo ay naga siiso terminalkan cusub ee shirkadda Isbaanishka ah.
Cusbooneysiinta OTA ee Android 7.1.1 ee loogu talagalay aaladda 'Aquaris U' ee ka socota BQ ayaa halkan ah, laga bilaabo maanta Aquaris U Plus.
BQ Aquaris X Pro waa meel dhexe oo cusub oo leh astaamo aad u hami badan. Iyada oo burburka tartanka ah, soo bandhig sida ugu fiican ee kamaradaha wanaagsan iyo awoodda.
Heerka 'Aquaris U', cusub ee bartamaha BQ
Bq waxay soo bandhigtay noocyo cusub oo casriga ah ee Android, Aquaris U, oo leh sedex taleefan oo cusub: Aquaris U, Aquaris U Plus iyo Aquaris U Lite.
BQ Aquaris X5 Plus. Telefoonka casriga ah ee BQ ayaa u muuqda mid aad iyo aad u wanaagsan
BQ Aquaris X5 Plus waa taleefanka casriga ee cusub ee Android ee isbaanishka caalamiga ah oo leh tilmaamo farsamo oo aad ugu muuqda.
bq Aquaris X5, telefoonkii ugu horreeyay ee Cyanogen wata
Telefónica iyo bq waxay hada soo bandhigeen bq Aquaris X5, oo ah shirkadii ugu horeysay ee shirkada casriga ah iyadoo Cyanogen 12.1 ay tahay heerka.
BQ waxay soo bandhigi doontaa taleefankeeda casriga ah CyanogenMod usbuuca soo socda
Shirkadda Isbaanishka ah ee BQ, oo ay weheliyaan Movistar iyo CyanogenMod, ayaa soo bandhigi doonta taleefan casri ah oo cusub toddobaadka dambe.
Kiniiniga BQ Aquaris M10, oo si rasmi ah loo soo bandhigay
Soo saaraha Isbaanishka ayaa maanta saxaafadda u soo bandhigay warkiisa, oo ay ka mid yihiin kiniinka cusub ee casriga ah ee loo yaqaan 'Aquaris M10 smart'.
BQ Aquaris X5 si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay
Soosaaraha Isbaanishka ee BQ ayaa si aad u wanaagsan u shaqeynaya. Saldhigyadeeda ayaa si aad ah ugu iibiya wadankeena. Hadda xubin cusub ayaa lagu daray, BQ Aquaris X5.
Bq Aquaris A4.5 4G, Android One horeyba wuxuu ugu sugnaa Spain
Bq Aquaris A4.5 4G waa sharadka loo yaqaan 'Android One' ee dalkeenna oo leh terminaal aad ku keydin karto 169 XNUMX hadda.
Android One wuxuu ku degi doonaa Spain BQ
BQ waa shirkadda Isbaanishka ah ee mas'uul ka noqon doonta soo saarista aaladda 'Android One' ee dalka Spain bisha Sebtember 17.
BQ waxay soo bandhigeysaa seddexdeeda taleefannada casriga ah ee cusub: Aquaris M5.5, M5 iyo M4.5
BQ ayaa maanta soo bandhigtay seddex taleefan cusub: Aquaris M5.5, Aquaris M5 iyo Aquaris M4.5 oo balaarinaya qoyska Aquaris
bq waxay kordhisaa qiimaha noocyadeeda kala duwan ee casriga ah iyo kumbuyuutarrada kala duwan
Imaatinka Janaayo, daaqadaha dukaamada badankood waxaa laga buuxiyey boorar lagu sheegayo iibka. In kasta oo ay u muuqato in qof kastaa aanu isku fikir ahayn. Ama ugu yaraan bq. Waana in soo saaruhu uu go'aansaday inuu sare u qaado qiimaha wax soo saarkiisa qaar.
Ku guuleystaha isku aadka Bq Aquaris E6
Ugu dambeyntiina, Bq Aquaris E6 ayaa ku guuleystey barbarihii Carlos Merino García ee ka dhacay Ciudad Real.
[SWEEPSTAKES] BQ Aquaris E6 oo bilaash ah oo wata Androidsis iyo HolaMOBI
Kaqeyb qaado mahadsanid Androidsis iyo HolaMOBI ee Isku aadka 'BQ Aquaris E6'.
Sida loo rakibo soo-kabashada la beddelay ee Bq Aquaris 5,7 ″ (Aad u fudud)
Ku dhammaystir casharrada wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu rakibto Soo-kabashada la beddelay bq Aquaris 5,7 ".
Sida loo xidido Bq Aquaris 5,7 ″ 10 ilbidhiqsi
Halkan waxaan ku sharxayaa habka fudud ee loo raacayo Root the Bq Aquaris 5,7 "kaliya 10 ilbidhiqsi oo aan loo baahnayn faragelin PC ah.
Bq Aquaris 5, 5HD iyo 5.7 ayaa loo cusbooneysiin doonaa Android KitKat bisha Sebtember 15
Qodobka aan ku ogaanno wararka ah in bq Aquaris 5, 5HD iyo 5.7 lagu cusbooneysiin doono Android KitKat bisha Sebtember 15.
Bq waxay soo saartay kiniinkeeda Bq Edison 3 iyadoo la yaab leh
Bq, shirkada Isbaanishka ayaa soo saartay kiniin cusub oo wata Android Kit Kat, Bq Edison 3 waa isbedel ku yimaada qoyska Bq Edison oo leh horumar weyn.
bq Aquaris 5, Aquaris 5 HD iyo Aquaris 5.7 waxay lahaan doonaan qaybtooda Android KitKat
BQ Aquaris 5, Aquaris 5 HD iyo Aquaris 5.7 waxay lahaan doonaan saamigooda Android KitKat, oo lagu xaqiijiyey astaanta shirkadda ee Google+
bq Aquaris 5.7, terminal xidig cusub oo soo saaraha Isbaanishka ah
bq ayaa hadda iibisay bq Aquaris 5.7, oo ah jawiga cusub ee soo saaraha Isbaanishka kaas oo ay ugu talagashay inay ku gasho suuqa phablet.